Klopp oo taleefoonka ka wacay aabbaha dhalay Kylian Mbappe… (Muxuu kala hadlay?) – Gool FM
(Liverpool) 26 Abril 2020. Macallinka kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa lagu soo warramayaa inuu la xiriiray xiddigga Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe aabbihii, si uu kaga dhaadhiciyo in wiilkiisa uu u soo dhaqaaqo garoonka Anfield.
Mbappe ayaa ka mid ah da’yarrada ugu mustaqbalka wanaagsan kubadda cagta xilligan, waxaana dhowr jeer lala xiriiriya ku biirista kooxda Real Madrid, inkastoo kooxdiisa ay dul dhigtay qiimo gaaraya illaa 250 milyan oo gini.
Si kastaba ha ahaatee, Jurgen Klopp ayaa Reds ka dhigay mid ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub, isagoo 10-kii bilood ee lasoo dhaafay ku hoggaamiyay ku guuleysiga Champions League, UEFA Super Cup iyo Club World Cup.
Guulahaas iyo awoodda dheerriga ah ee ay lasoo baxday Liverpool ayaa u saamaxday inay ka mid noqdaan kooxaha ku dagaallamaya 21-jirkan kaasoo 30 gool u dhaliyay PSG xilli ciyaareedkan.
Klopp ayaa la xiriiray aabbaha dhalay Mbappe, si wiilkiisa uu uga dhaadhiciyo ku soo biirista kooxda Premier League hoggaamineysa, sida laga soo xiganayo warsidaha Le10 Sport ee ka soo baxa dalka Faransiiska.
Dagaalka laacibkan loogu jiro ayaa yeellanaya xiiso gaar ah, maadaama Real Madrid aysan wali ka quusan damacooda ku aaddan soo xero galinta weeraryahankii hore ee AS Monaco, halka Liverpool ay dardar xooggan ku soo gashay raacdada Mbappe.
De Ligt oo dhageysanaya dalabaadka Barcelona, Juve oo halkaas fursad ka eeganeysa, iyo sida ay Barca u xallin doonto xaaladda Neymar iyo Lautaro